Serasera amin'ny fotoana tena izy: inona ny WebRTC? | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 5, 2019 Alatsinainy Oktobra 5, 2020 Sienna Amelia
Ny serasera amin'ny fotoana tena izy dia manova ny fomba fampiasan'ny orinasa ny fisian'izy ireo tranonkala hifaneraserana amin'ny vina sy mpanjifa.
Inona ny WebRTC?
Web Real-Time Communication (WebRTC) dia fitambaran'ny kaonty sy API fifandraisan-davitra izay novolavolain'i Google tany am-boalohany izay ahafahan'ny fifandraisana amin'ny feo sy horonan-tsary amin'ny fotoana ifandraisany amin'ny fifandraisan'ny mpiara-miasa. WebRTC dia mamela ny mpizaha tranonkala hangataka fampahalalana amin'ny fotoana tena marina avy amin'ireo mpizahatany an'ny mpampiasa hafa, ahafahan'ny fifandraisana amin'ny peer-to-peer sy ny vondrona tena misy ao anatin'izany ny feo, horonan-tsary, chat, famindrana rakitra ary fizarana efijery.
Twilio - Inona no atao hoe WebRTC?
Hita hatraiza hatraiza ny WebRTC.
Ny tsena WebRTC manerantany dia $ 1.669 miliara USD amin'ny 2018 ary antenaina hahatratra $ 21.023 miliara USD manerantany amin'ny 2025.
Fikarohana momba ny tsena Zion
Taona maro lasa izay, WebRTC dia nanomboka ho mpamatsy protokol VoIP mikendry mpizaha tranonkala. Androany, tsy misy navigateur streaming audio / video tsy misy fampiharana WebRTC. Na dia eto aza ny mpivarotra sasany izay mino fa ny WebRTC dia tsy nahatanteraka ny nantenain'izy ireo, angamba ireo mpivarotra no tsy nahavita nampiasa WebRTC hananana traikefa ho an'ny mpampiasa ambony.
WebRTC dia miresaka fampivoarana ny resaka amin'ny Internet amin'ny Internet. Vao tsy ela akory izay, nanambara i Google fa mitazona feo / horonan-tsary / horonan-tsary 1.5 tapitrisa mahery ao anatin'ny minitra vitsy i Chrome. Tokony ho izany 214 tapitrisa minitra isan'andro. Ary ao amin'ny Chrome fotsiny izany! Ity misy fijery antsipirihany momba ny fahaiza-manao hita amin'ny fampiasana WebRTC.
Inona ny fifandraisana amin'ny ora tena izy misy amin'ny WebRTC?
Fizaràna efijery - Araraoty tsara ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa hafa eo noho eo. Ny fampiharana WebRTC 'Android / iOS chat video dia ahafahana mizara ny efijery lavitra amin'ny fitaovana hafa na mpampiasa misy fidirana mety. Miaraka amin'ny fanaovan-tsonia WebRTC, ny fiaraha-miasa maoderina lavitra dia apetraky ny roa amin'ireo mpamatsy sehatra fifandraisana lehibe indrindra dia ny Skype& Mirrorfly. Ny fizarana fizarana lamba dia manavao ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa iray amin'ny ambaratonga manaraka izay ny kaonferansa mifototra amin'ny fivoriana no asany lehibe. Manomboka amin'ny fifanakalozan-kevitra ka hatramin'ny famelabelarana, tranonkala web hatramin'ny fivoriana, ny fizarana ny efijery no fototr'izany.
Fihaonamben-dahatsary ho an'ny mpampiasa marobe - Ny valan-dresaka an-tsary momba ny mpampiasa marobe dia mitaky fahaiza-mihetsika betsaka mba hiatrehana mpampiasa an-taonina maro miaraka, eto no ilana resaka WebRTC. Ny mpizara fanaovan-tsonia WebRTC dia mamela ny fanaovana horonantsary sy feon-kira sy feon-kira marobe amin'ny antoko manerantany. Ny antso an-tsary sy ny feo WebRTC dia mitaky habetsahan'ny fantsona fampitam-baovao hampifandray ireo mpandray anjara iray manontolo amin'ny antso an-tsary amin'ny antoko maro. Ny rindrambaiko antso an-tsary WebRTC dia manatsara ny fifandraisana amin'ny antoko marobe amin'ny alàlan'ny MCU (singa fanaraha-maso Multipoint) sy SFUs (tarika mandroso Selective).
Fiaraha-miasa ao Ease - Ireo andro izay naha-niditra an-tsoratra kaonty iray dia ampidino ny lampihazo ary apetaho sehatra maro mba hifandraisana amin'ny mpampiasa iray hafa hiresahana. Miaraka amin'ny mpizara WebRTC miresaka amin'ny feo sy horonan-tsary, tsy misy dingana nentim-paharazana intsony. Ny resadresaka an-tsoratra WebRTC dia mahatonga azy ho mora sy tsotra kokoa ny miaina ny fiaraha-miasa tsy misy fotony. Ny fiaraha-miasa amin'ny fotoana tena izy dia atao tsotsotra amin'ireo sehatra napetraka miaraka amin'ireo mpizaha tranonkala tohanan'ny WebRTC.
File Sharing - Ny fandefasana angon-drakitra goavambe dia fihetsika henjana sy sarotra foana izay nahatonga ny mpampiasa hifindra amin'ny rindranasa hafa toy ny mailaka na kapila. Tsy dia tsotra loatra ny fizotry ny famindrana angona fa nandany fotoana, ezaka ary data be dia be. Miaraka amin'ny mpizara famantarana WebRTC, manery ny fizotrany izy amin'ny famelana azy handefa azy mivantana amin'ny alàlan'ny tranonkala mifangaro miaraka aminy API antso video. Ary ankoatra izany, WebRTC dia mamela ny fandefasana ireo rakitra amin'ny latency ambany indrindra ambany na inona na inona ny fantsom-pifandraisana. Ambonin'izany dia mamindra data ao anaty tafo iray azo antoka ny WebRTC.
Fandraisana an-tsary sy feo maro azo antoka - WebRTC Signaling WebSockets dia manome protokol RTP matanjaka (SRTP) izay manafina ny resadresaka am-peo ataon'ny vondrona WebRTC rehetra ampitaina amin'ny Android, iOS & fampiharana web. Ary koa, mamokatra fanamarinana ho an'ny fifandraisana amin'ny Wifi izy io mba hiarovana ny antso amin'ny fidirana tsy ilaina sy ny firaketana ireo antso.
Serivisy amin'ny fotoana tena izy ho an'ny Live Communication - WebRTC dia manana fahafaha-mampifangaro amin'ny rindranasa rehetra hiaina resadresaka mivantana amin'ireo seha-pihariana. Ny fotodrafitrasa WebRTC sy ny chat video SDK dia mamorona làlana mivantana hanaovana resaka mivantana na inona na inona asan'ny indostria, manomboka amin'ny antsinjarany, ecommerce, fahasalamana, fanohanan'ny mpanjifa, manome serivisy fifandraisana mivantana.
Fifaneraserana latency ambany - API Video Call miaraka amin'ny fampidirana WebRTC dia ahafahana mizara angona mivantana amin'ireo fitaovana na rindranasa tsirairay avy nefa tsy miditra amin'ireo andiana mpizara. Ny fidirana inter-browser dia mandamina ny fikorianan'ny data sy ny tombony amin'ny tambajotra latency ambany. Ny WebRTC dia ahafahan'ny rindran-tserasera miresaka fivezivezena misy hafatra sy fisie mankany amin'ny rindranasa hafa na inona na inona fantsom-pifandraisana ananan'ny tranonkala.
Antso an-dahatsary WebRTC mampiasa Node.js
Ampidiro ny WebRTC amin'ny fampiasana MirrorFly
Te hanomboka anio? Zahao ny fotoana tena izy ao amin'ny MirrorFly Chat API. Miaraka amin'ny Chat API azy ireo, azonao atao ny manangana fampiharana fandefasan-kafatra marobe amin'ny alàlan'ny endri-javatra isan-karazany sy fampiasa. Manolotra API tena izy ho an'ny rindranasa tranonkala sy SDK ho an'ny rindranasa finday Android sy iOS izy ireo.
Tags: Google +amin'ny fotoana katrokartcPikantsarysdkvideo conferencewebrtc
Sienna dia mpamaky fatratra, mpanoratra mafana fo, mpanao sarimihetsika, olon-tsotra mandehandeha ary maro hafa. Tiako ny manoratra momba ny haitao sy ny fomba ifandraisany amin'ny fiainanao isan'andro.
Iterable: Sehatra Marketing Growth-Channel Growth Marketing